နယူးဒေလ်ီမြို့ Indraprastha Apollo ဆေးရုံများတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်း
Bone marrow Transplantation (ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်း) ဆိုတာဘာလဲ ?
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးခြင်းသည် ခက်ခဲသော အစားထိုးကုသမှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Leukemia (သွေးဖြူဥကင်ဆာ)၊ Lymphomas (ပြန်ရည်ကြောအကျိတ်ကင်ဆာများ)နှင့် အခြားသော ကင်ဆာမဟုတ်သောရောဂါများ ဥပမာအားဖြင့် thalassaemia (သွေးအားနည်းရောဂါ) စသည့်အခြေအနေများတွင် ပုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Bone marrow (ရိုးတွင်းခြင်ဆီ) ဆိုတာ အရိုးထဲတွင် တည်ရှိပြီးသွးဆဲလ်များကိုထုတ်ပေးသော စက်ရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်သော
White blood cell – WBC (သွေးဖြူဥ) - ရာဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ထုတ်ပေးခြင်း
Red blood cell – RBC (သွေးနီဥ) - ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ အာက်စီဂျင်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း
Platelet (သွေးဥမွှား) - သွးယိုစိမ့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Stem cells ဆိုတာသွးနီဥ၊သွးဖြူဥ၊သွးဥမွှားများအဖြစ်သို့ မဖွံ့ဖြိုးခင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ ပထမအဆင့်ထုတ်ပေးလိုက်သောသွးဆဲလ်များဖြစ်သည်။ ထို stem cell များသည် အစားထိုးကုသမှုအတွက် အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါနှင့်ရာဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ထုတ်ပေးရန် ခုခံအားစနစ်ကို ထာက်ပံ့ပေးရုံသာမက diseased marrow ( ရိုးတွင်းခြင်ဆီချို့ယွင်းခြင်း) တွင်လည်း stem cell ကို အစားထိုးနိုင်သည်။
အဓိကအားဖြင့် Autologous နဲ့ Allogenic ဆိုပြီး နည်းလမ်း (၂) ခု ရှိပါတယ်
Autologous transplant- High dose treatment (သွေးဆဲလ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သောဆးကုသမှုခံယူခြင်း) မပြုလုပ်မီ လူနာရဲ့ bone marrow-ရိုးတွင်းခြင်ဆီ (သို့) peripheral blood stem cells- လက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောထဲမှတစ်ဆင့် stem cell ပမာဏအနည်းငယ်ကို ခဏ ထုတ်ယူထားသည်။ ကုသမှုခံယူပြီးနောက် bone marrow (သို့) stem cell ကို သွးပြန်ကြောမှတစ်ဆင့် ပန်ထည့်ပေးသည်။
Allogenic Transplants - အလှူရှင်ထံမှ bone marrow (ရိုးတွင်းခြင်ဆီ) ကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရိုးတွင်းခြင်ဆီကို အစားထိုးကုသခြင်းတွင် အလှူရှင်နှင့် လူနာကြားတွင် tissue matches (လှူလို့ရ/မရ စစ်ဆေးခြင်း)ပုလုပ်ပြီး ကိုက်ညီမှသာလျှင် လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ လူနာ၏ဆွေမျိုးသားချင်း ဥပမာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ၊ မိဘထံမှ ရယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်နည်းလမ်းတွေကတော့ international registry မှတစ်ဆင့် အလှူရှင်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မွးကင်းစတွင် အချင်းသွေးကို သိမ်းဆည်းထားပါက ထိုpublic cord blood banks မှ Umblical cord stem cells (အချင်းသွေးဆဲလ် stem cell) ကို အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Basic process (အခြေခံအဆင့်များ)
အစားထိုးကုသခြင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် အဆင့် (၃) ဆင့်ရှိပါတယ်။
1 st step (ပထမအဆင့်) - အလှူရှင်ထံမှ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ (သို့) stem cells စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းသွေးမှလည်း stem cells ကို သိမ်းထားတာရှိလျှင်လည်း ပန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
2 nd step (ဒုတိယအဆင့်) - လူနာတွင် ရှိနေသော ရိုးတွင်းခြင်ဆီကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး လူနာကို stem cells အသစ်ထည့်ဖို့ အသင့်ဖစ်နေစေရန် ကူညီပေးသည်။
3 rd step (တတိယအဆင့်) –သွးသွင်းခြင်းကဲ့သို့ bone marrow-ရိုးတွင်းခြင်ဆီ (သို့) stem cells ကို သွးပြန်ကြောမှတစ်ဆင့် လူနာထံသို့ သွင်းပေးသည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသပြီးနောက် ထိုအစားထိုးထားသောရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ သွးဆဲလ်များကို ကာင်းစွာ ပန်လည်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ရန် လအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
How are the peripheral blood stem cells collected (stem cell တွေကို ဘယ်လိုစုဆောင်းရမလဲ) ?
Stem cell harvesting တွင် လူနာကို ပထမဆုံး growth factor (ဆဲလ်များကို ပွားများစေရန်) များန့စဉ်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ကြာမြင့်ချိန်မှာ ၃နာရီခန့်ဖြစ်သည်။ ပုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကတော့ လူနာကို လဲလျောင်းခိုင်းထားပြီး လက်မောင်းတစ်ဖက်ရဲ့ သွးပြန်ကြောမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ထိုထုတ်ယူလိုက်သောသွေးကို centrifuge စက်ထဲသို့ထည့်ပြီး stem cell တွေကို ခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် ခွဲထုတ်ထားသော stem cell များကိုသွးပြန်ကြောမှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပန်ထည့်ပေးသည်။ အချို့သောရောဂါများတွင် ထိုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုအပ်သောအရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ရာဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Follow-up (ကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဆရာဝန်နှင့် ပန်လည်ပြသခြင်း) ဆေးရုံမှဆင်းပြီးနောက် ပထမ(၂)လမှ (၃)လအတွင်း လူနာကို မကြာခဏသွးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သင့်သည်။ ထို့ပြင် ရာဂါပိုးမွှားများ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းနှင့် Graft-versus host disease (ခုခံအားစနစ်မှ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါက တိုက်ထုတ်မည့်အရာများကြောင့် အစားထိုးမှုကုသမှုကို ထိခိုက်ခြင်း) ကိုလျာ့ချပေးသောဆေးများကိုလည်း သွးထဲတွင်ရှိနေရမယ့်ဆးပမာဏကို ပုံမှန်တိုင်းတာပေးရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် ထိုဆေးများသောက်နေစဉ်တွင် ခုခံအားစနစ်လျော့ကျနိုင်သောကြောင့် လူနာကို အထူးဂရုစိုက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။
လူနာမှ အာက်ပါလက္ခဏာများခံစားရပါက ချက်ချင်းဆေးရုံသို့ ပို့ပေးရန် အထူးလိုအပ်သည်။
၂နာရီကျော်ကြာ ကိုယ်အပူချိန် 37.5°C ကျော်ခြင်း
ရောဂါပိုးမွှားများဝင်ခြင်း ဥပမာ-အရေပြားနှင့် ပါးစပ်နေရာများ
How will life be afteratransplant (ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ) ?
အစားအသောက် အစားထိုးကုသမှုခံယူပြီး လအနည်းငယ်အတွင်း ခုခံအားစနစ်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ ပန်မရောက်သေးခင် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများကို သချာချက်ပြုတ်စားသောက်သင့်သည်။ မကျက်တကျက်ချက်ထားသော အစားအစားများကို ရှာင်သင့်သည်။
လူထုထူထပ်သောနေရာများကို ရှာင်ရှားခြင်း သွေးဆဲလ်ပမာဏများ ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပန်မရောက်မီရာဂါပိုးမွှားများကူးစက်ခြင်းကိုလျာ့ချနိုင်စေရန် ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကား မှတ်တိုင်နှင့် အခြားလူထူထပ်သောနေရာများသို့ သွားခြင်းကိုရှာင်ကြဉ်ရမည်။ အစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ၃လမှ ၆လလောက်ဆိုရင် သွားလို့ရပါပြီ။ ထို့ပြင် လူနာကို ကူးစက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် chicken pox (ရေကျောက်ရောဂါ)င့် measles (ဝက်သက်ရောဂါ)ဖြစ်နေသော ကလေးငယ်များနှင့်လည်း ထိတွေ့ခြင်းမပြုရ။
ကျောင်း၊ အလုပ်များသို့ ပန်သွားခြင်း ဆရာဝန်နှင့်သချာတိုင်ပင်ပြီးသွးဆဲလ်ပမာဏများ ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျာင်း (သို့) လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်သွားလို့ရပါပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်မည့် လူနာများအနေဖြင့် အချိန်ပိုင်းလောက်ပဲ အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ ပန်လည်စတင်သင့်သည်။
အားလပ်ရက်နှင့်ခရီးထွက်ခြင်း အစားထိုးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ၃လမှ ၆လအတွင်း လူနာအနေဖြင့်ဆးရုံသို့ ပုံမှန်သွားသင့်သည်။ လိုအပ်ပါက သွးသွင်းရနိုင်သည့်အတွက် ခရီးထွက်ရန်လိုအပ်ပါကဆးရုံနှင့် မဝေးသောနေရာသို့သာ ခရီးထွက်သင့်သည်။ အစားထိုးကုသပြီး ပထမ (၁)စ်မှစပြီး ခုခံအားစနစ်မှ အလုပ်လုပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ခရီးသွားလို့ ရနိုင်သည်။ ထို့ပြင် အချို့သော ကာကွယ်ဆေးများထိုးခြင်းကိုရှာင်ရှားရမည်။ ခရီးထွက်ရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုခုထိုးရန် လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် သချာစွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်သည်။
ကလေးများတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်း ကလေးများတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်းသည် လူကြီးများတွင် အစားထိုးကုသမှုနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်။ အစားထိုးကုသမှုကို ခံယူတော့မည်ဆိုလျှင် ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် နာက်ဆက်တွဲ မျိုးပွားခြင်းများထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေရန် ဆရာဝန်နှင့်သချာဆွေးနွေးပါ။ ကလေး ၁နှစ်မှ ၂နှစ်အရွယ်သည် ခုခံအားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သောကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမည့်ဆရာဝန်နှင့် မဆွေးနွေးမီ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နှင့် သချာတိုင်ပင်ပါ။
        